Orinasa mpamory masoandro, mpamatsy - mpamokatra mpamory angovo avo lenta
2.5 m² Flat Plate Solar Collector ho an'ny mpamono rano amin'ny masoandro
Ny andiam-panangonana mpamorona herinaratra C mivelatra 2.5 m² dia natao ho an'ny mpanafana rano 200L sy rafitra fanamainana rano mafana.
Fantsona 25-30 fantsom-boasary fantsom-bokatra Solar Collector Kit Horizontal Mounted
Kitapo mpanangona fantsona 25-30 an'ny SolarShine dia mipetaka amin'ny toerany, kit kitapo feno kitapo miakatra amin'ny tany, fantsom-bokatra fanangonana fantsom-baravarankely, manifold, frame ary Kit Frame.
Tube fantsom-bokatra fantsom-bokatra miangona 50 miorina mitsangana
Kit ny mpanangona fantsona fantsona 50 an'ny fantson'ny masoandro an'ny SolarShine dia karazana mitsangana mitsangana.
Ny kitapo mpanangona dia mameno amin'ny bracket fametrahana ny tany, fantsom-bokatra fanangonana fantsom-baravarankely, fantsom-baravarana sy boaty ary fonosana.
Mpanangona Tube Tube voafafa ho an'ny rafitra fanafanana rano mafana
Ny mpamory herinaratra fantsona SolarShine dia mpamorona fantsona nafindra toerana ho an'ny mpanafana rano amin'ny masoandro monina sy ny haben'ny tetik'asa rafitra fanamafisana rano mafana afovoany. Ny tombony azon'ireo mpanangona dia ny vidiny ambany, ny fahombiazany ary ny fiainana maharitra sns.
Sarimihetsika avo lenta fisaka avo lenta miaraka amin'ny fonosana Chrome mainty
SOLARSHINE C- andian-dahatsoratra mpamory masoandro takelaka fisaka dia natao manokana ho an'ny mpanafana rano amin'ny masoandro monina sy ny rafi-pampanafana rano be an'ny masoandro afovoany. Ity mpamory masoandro ity dia azo apetraka amin'ny faritra misy ny toetrandro, mifangaro amin'ny fitaovana avo lenta izy io, manana endrika kanto sy firafitra mafy orina.
Mpanangona solosaina fisaka 2 m² ara-toekarena ho an'ny heater rano amin'ny masoandro sy tetikasa tetikasa rano mafana be
Ny maodelin'ny fanangonana masoandro takelaka fisaka plastika dia famolavolana manokana ho an'ny rafitra fanamainana rano mafana mafana amin'ny masoandro, rafitra fantsona hafanana mifangaro hafanana avy amin'ny masoandro, na ho an'ny heater amin'ny rano ao an-trano miaraka amin'ny teti-bola mitahiry vola.